Work Style Archives - Page3of4- Spiceworks Myanmar
2019-09-12 posted by Ei Phyo Mon
Hello! I’m Ei Phyo Mon and working as an Administrator at Spiceworks Myanmar. Today I would like to share about
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ စိုင်းအောင်နိုင်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ Spiceworks Myanmar Co.,Ltd တွင် Web Designer အဖြစ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့အတွက်တော့ ကျွန်တော်ရဲ့ six months working experiences ကို
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့်နာမည် ဌေးမင်းခေါင် ဖြစ်ပါတယ်။ SpiceworksMyanmar Co.,Ltd တွင် Web Developer ဖြင့် System ပိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော် ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ ကျွန်တော့်၏ Japan ခရီးစဉ်လေးရဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။